Gudoomiyaha Dhalinyarada Gobalka Banaadir oo Xaflad Soo dhaweyn ah loogu sameeyay Magaalada Nairobi – Radio Muqdisho
Gudoomiyaha Dhalinyarada Gobalka Banaadir oo Xaflad Soo dhaweyn ah loogu sameeyay Magaalada Nairobi
Xafladani oo ay soo qaban qaabiyeen ururada dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kenya ayaa waxaa lagu soo dhaweynayay Gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobalka banaadir Cabdikafi Maxamuud Makaraan iyo xubno kale oo howlo shaqo u yimid magalada Nairobi ee dalka Kenya.
Xafladan soo dhaweynta ah ayaa waxaa ka qeyb galay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan xaafada islii oo isugu jiray Culimaa’udiin,waxgarad ,ganacsato,ururada dhalinyarada iyo marti sharaf kale.
Bilowgii xaflada ayaa Kooxda dhaqanka ee Tayo Cultural Group waxay halkaasi ku soo bandhigeen dhaantooyin ka tarjumayo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed,maadaama lagu jiro todobaadka xuska 43-guuradii ka soo wareegatay markii la qoray afka Soomaaliga.
Shiikh Cali Maxamuud Xasan Shiikh Cali Wajiis oo ka mid ahaa Culimaa udiinkii xaflada ka hadlay ayaa waxa uu ku amaanay Dowlada uu hogaamiye madaxweyne xasan Sheekh inay dhalinyarada Fursad u siisay inay kaalin ka qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka.
“Waxyaabaha lagu amaano dowlada Madaxweyne Xasan Shiikh waxaa ka mid ah inay kaalintii dhalinyarada ay fureen oo soomaaliya jiilka maanta hogaamiya ay dhalinyaro u badanyihiin”Ayuu Yiri Shiikh Cali Wajiis.
Gobolka banaadir waad ogtihiin gudoomiyihii hore waxa uu abuuray gudoomiyayaal wada dhalinyaro ah wada jaamiciyiin ah iyo agaasimayal ilaa waaxda ugu hooseysa ay wada jaamici yihiin ayay gaartay maanta”Ayuu sii raaciyay Shiikh Cali Wajiis.
Munabasabada oo ay khudbado ka jeediyeen Waxgarad iyo Mas’uuliyiinta Ururada dhalinyarada ayaa dhammaan xubnihii halkaasi ka hadlay waxay si weyn dhalinyarada gobalka banaadir ugu amaaneed waxqabadkii iyo Marxaladihii adkaa oo ay ku soo shaqeeyeen, iyagoona balan qaaday inay si weyn ula shaqeyn doonaan ururka dhalinyarada gobalka banaadir.
Gadoomiyaha dhalinyarada gobalka banaadir Cabdikafi Maxamuud Makaraan oo gaba gabadii hadal ka jeediyay xaflada lagu soo dhaweynayay ayaa waxa uu ka warbixiyay Waxqabadka dhalinyarada gobalka banaadir iyo daruufihii adkaa ee ay ku soo shaqeeyeen.
Cabdi kaafi oo Arrimo dhowr ah soo hadal qaaday ayaa waxa uu Cambaareeyay Falkii dhawaan lagu Xasuuqay Dadkii ku sugnaa Maqaayada Liido,isagoona ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeeyay Dadkii ku geeriyooday,halka dadkii ku dhaawacmayna uu alle uga baryay in uu Caafimaad taam ah Siiyo.
Gudoomiyaha dhaliyarada gobalka banaadir ayaa sidoo kale waxa uu uu ballan qaaday in ay ka shaqeyn doonaan mideynta dhalinyarada soomaaliyeed ee ku sugan daafaha Caalamka.
“Waxan doonayaa oo aan jeclahay in leyga aqbalo in la sameeyo isku xir guud oo ay yeeshaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walboo ay joogaan,aniga ayaa iska bilaabaya waxan balan qaadayaa in dhalinyarada gobolka banaadir iyo Nairobi ay mid noqdaan”Ayuu Yiri Makaraan.
Ururka Dhalinyarada Gobalka banaadir ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay ku howlanaa sidii isku xir ay ugu sameeyn lahaayeen ururada dhalinyarada isla markaana ay xiriir wada shaqeyn u yeelan lahaayeen dhalinyarada soomaliyeed ku dhaqan dunida dacaladeeda.​
Madaxweynaha oo Muqdisho ka furay shir gaar ah oo qeyb ka ah Madasha Wadatashiga Qaranka+Sawirro
Allaha u naxariiste Cabdi Xaaji Goobdoon oo Saakay ku geeriyooday Muqdisho”Dhageyso”
Allaha u naxariiste Cabdi Xaaji Goobdoon oo Saakay ku geeriyooday Muqdisho"Dhageyso"